Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho.
Muqdisho(Halqaran.com) Qarax is-miidaamin ah oo uu geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa goordhaw ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taalla agagaarka Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Taliska Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi uu ku geeriyooday kaliya ruuxii is-qarxiyay.
Xaaladda goobta ayaa weli aad u kacsan, waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo isku geedaamay meesha ay wax ka dhaceen.